Ogaden News Agency (ONA) – Q3xaad – JWXO Waa Ururka Kali ah ee Faragalinta Itobiya Ka Madaxbanaan (Istraatiijiyada Cadawga ee ku Wajahanayd ONLF)
Q3xaad – JWXO Waa Ururka Kali ah ee Faragalinta Itobiya Ka Madaxbanaan (Istraatiijiyada Cadawga ee ku Wajahanayd ONLF)
Posted by ONA Admin	/ September 24, 2014
Sidaan kusoo sheegnay Q2aad ee taxanahan, Itobiya siyaaba kala duwan ayay isugu dayday inay Ururka dhexdiisa kula dagaalanto. Dhowr qodob ayaan Q2aad kusoo tilmaanay, waxyaaba kalena way jireen, sida qaar lagula soo heshiiyay inay jaaliyadaha aad uga dhex muuqdaan inta looga yeedhayo, oo shirarka aad uga caayaan Itobiya, ururkana aad uga amaanaan. Marka dadweynaha ishooda ay qabato oo uu ka noqdo agtooda halgamaa loo hanweynyahay inloo yeedho oo uu kasoo jeedsado Jigjga lana arko isagoo ka hadlaya TV-ga Qudhunwade. Waxaa ka mid ahaa in qaar loo adeegsaday inay kaadirka iyo dhalinayarada kula dhex jiraan qas iyo inay shaki ka dhex abuuraan. Shirqooladaa iyo kuwa kaloo badan ayay Jabahdda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ku guulaysatay inay fashisliso oy ka gudubto, meesha sidaan soo sheegnay ay ku dhaceen ururadii iyo maamuladii Somaliyeed ee xoriyadda soo ahayd 30ka sano. Hadaba; su’aasha waxay ahayd siday ONLF urur ahaan uga soo gudubeen shirqooladaa?
Waxaa hubaal ah inay ONLF ka gudubtay caqabada badanoo gumaysiga uu islahaa way adagtahay inuu urur gobanimadoon ah oo qarnigan 21aad halgan hubaysan wada ayaa ka gudbi doona. Waxayna taariikhda qori doontaa (maadaama aan la gaadhin weli waqtigii arima badanoo xasaasi ah daaha laga rogi lahaa), siyaabihii kala duwanaa ee xubnaha ONLF oo isku duuban ay ula falgaleen shirqooladii gumaysiga Itobiya ay ugu talagaleen inay ku burburiyaan jiritaanka ururka.
Qofka doonaya inuu Wax ka qoro habka ay Itobiya ula dhaqanto Somalida, waxaa lagama maarmaan ah inuu fahamo istraatiijiyada uu cadawga u dajiyay arintaa iyo wuxuu ka aaminsan yahay Somalida. Marka lasoo ururiyo; Istraatiijiyada Itobiya ay adeegsato markay qof Somali ah la tacaamulayso wuxuu ka kooban yahay 3exdan soo socota;
Hadaan ka gudubno Somaliya iyo siday Itobiya u qabsatay, Istraatiijiyadaa 3exda ah een soo sheegnay, Itobiya midwalba way adeegsatay say ula dagaalanto ururka ONLF, maadaama aan nahay dad Somali ahna, waxay iska aaminsan tahay in aan u nugul nahay Qabyaaladda, Handadaada iyo Laaluushka.
Hadaan dib u dhigano habkay Itobiya ugu adeegsatay shacabkeena qodobadaa aan sheegnay, oon fiirino urur ahaan, Qorshaha cadawga wuxuu ahaa in Jabhadda ONLF ay ka dhigto urur Qabiil, xubnaha ururka JWXO-na ay ku dhaqmaan Qabyaalad. Wuxuu cadawga aad u buun-buuniyay isagoo adeegsanaya Somalida iyo qaar dalka u dhashay oo aqoonyahanimo sheeganaya in lagu tilmaamo Ururka ONLF inuu yahay urur qabiil kali ah u taagan. Wuxuuna u arkayay in midaa hadday u hirgasho oo xubnaha iyo dadweynaha taageera halganka ay aqbalaan oy sidaa aaminaan, talaabada ku xigi lahayd waxay ahaan lahayn in hoos looga sii daadago oo la yidhaahdo JWXO waa ururkii reer Hebel, taasoo ku dambayn lahayd siday ugu tala galeen in reer walba uu si gooni ah Itobiya ugu tago isagoo danahiisa gaarka ah ku baryootamaya. Waana sababta 1aad ee ururada iyo xisbiyadii Somaliyeed ay ku burbureen. Waxaa xiqiiqa ah, marka Xisbi uu aamino una dhaqmo inuu u taagan yahay dan Qabiil ka mid ah qabiilada Somaliya, inuu isla waqtigaa diyaarsaday kafantii lagu aasi lahaa, sababtoo ah wuxuu ururkaasi u nuglaanayaa inuu fuliyo danaha Itobiya ay ka leedahay dalkiisa, suu u ilaaliyo dantii qabiilka, iyadoo waliba la ogyahay inuusan qabiilku lahayn meeluu ku dhamaado oo jifo walba markaasi uu dan gaar ah sii yeesho. Arintaasi ONLF way ka gudubtay inkastoo qaar badan ay ku qafilantahay fikrad uu iska dhaadhiciyay oo ah Ogaden waa magac qabiil sidaa daraadeed ONLF waa urur qabiil isagoon u haynin daliil cilmi iyo taariikh toona ku dhisan aan ka ahayn – O- da– macnaheesu waa Qabiil .
Qodobka kale ee ah Laaluushka oon ola jeedno in qof ka mid ah Bulshada ama Ururka la siiyo ama loo balan qaado wax maadi ah haduu ka tanaasulo mabda’iisa ama u fududeeyo cadawga danihiisa, waxaan odhan karnaa dadka ugu badan ee Itobiya ay siisay laalushka noocaa ah waa Somalida Ogadenya. Waxaa ka mid ah hadalada uu Siyaasigii Somaliga ahaa een Q1aad kusoo sheegay yidhi; Itobiya waxay ka heshay Somaliya qaar bilaash ugu shaqeeya iyagoo isleh danaha qabiilkaaga ama dantiisa siyaasiga ah ayaa ku xidhan in Itobiya la raali galiyo. Inkastoo qaar badan oo noocaa ah ay ku dhex jiraan bulshada S.Ogadenya, hadana Itobiya say u hesho ama ugu hirgasho dacaayadaheeda ah ONLF gudaha iyo dibadaba waan ka dhamaynay, waxay ku bixisay kharash xoog leh iyo laaluush badan. Waxaan la soconaa mashruucii Qurba-joogta loo bixiyay iyo kharashka ku baxay. Sidoo kale shabakadaha Somalida iyo TV-yada afka Somaliga ku hadla oo Itobiya ay siiso dhaqaale badan say dacaayadahaa u faafiyaan ama aanay waxba uga qorin ama uga soo daynin TV-yada arimaha quseeya ONLF. Xataa heer waxay gaadhay Itobiya ay mushraixiinta xisbiyada Kenya ama Jabuuti kula gogortanto oy kharash ku siiso ama kula dagaalanto ONLF darteed.
Arimahaasoo idil markay waxba ka qaban waayeen halganka shacabka Ogadenya oo hakin kari waayeen horumarka siyaasadda ururka ONLF, ayuu cadawga abaabulay dilal qorshaysan oo gudaha iyo dibadaba ka dhaca oo xubnaha ururka iyo kuwa bulshada ka mid ah lagu bartilmaansanayo. Qaar ka mid ah dilalkaasi waxay u dhacayeen iyadoo loo dilayo hayb ahaan, si aargoosiga ururka u noqdo mid ku qotoma sidoo kale hayb.
Qorshaha cadawga wuxuu ahaa in loo aaneeyo falkaasi inuu ahaa go’aan ka soo baxay madaxda sare ee ururka. Ka dibna xubnaha ay is wada qabsadaan, gaar ahaan kuwa gudaha oo midwalba uu reerkiisa sidaa ula safto.
Arintan noocan ah oo ka mid ah istraatiijiyada cadawga uu ku kala qaybiyay umadii Somaliyeed, waxay ONLF kaga gudubtay go’aan adag oo ururka uu gaadhay oo ahaa in qofkii dambiile ah oo shacabka iyo halganka dambi ka galay uu noqdo shaqsi isaga dambiile ah oo aan lahayn hayb loo aaneeyo. Go’aankaasi wuxuu ahaa go’aan loo wada hogaansamay oo aan sahlanayn markaad eegto dareenka qabiilka iyo dhaqanka Somalida ee ku dhisan –Fiqii Tolkii Kama Jana Tago – taasoo loola jeedo xataa culumada diinta in aanay tolkood fal Cadaabka lagu galayo Janada ka dooran.
Dhanka xuduudaha ayuu sidoo kale ka socday qorshaha dilalka oo gumaysiga uu isku dayay isagoo adeegsanaya maamulada uu halkaa ka dhisay inuu ka abuuro dagaal u dhexeeya qabiil iyo ONLF. Qorshaha cadawga wuxuu ahaa in colaad laga abaabulo xuduudaha si ciidanka ONLF ee ka hawlgala aagagaa ay ugu milmaan dagaaladaa qabiilka ku dhisan oo cadawgana isagoo sii hurinaya uu isku daawado. Qorshihii noocaa ahaana waxaa lagaga gudbay dulqaad iyo iska cabin iyo wacyigalin bulshada labada dhanba ah.
Tusaalooyinkaa ayaa inagaga filan inaan ku muujino qorshayaashii uu cadawga u dajiyay inuu kula dagaalamo ururka ONLF suu uga weeciyo hadafkuu lahaa ururka ee xoreynta dalka, ugu dambayna ONLF uga dhigo urur la mid ah ururadii Somalida oo u adeega danaha Itobiya.
Waxaan qaybaha dambe kaga hadli doonaa Qorshaha uu cadawga u dajiyay dadweynaha Ogadenya ee Gudaha iyo Dibadaba jooga suu isaga horkeeno jabhadda ONLF iyo dadweynaha taageera halganka.